Foldable mavhiripu inogona kukwana mumotokari diki.
Ergonomic mavhiripu huya zvakajairika neyedu patent S-Shape Seating System, iyo inopa nyaradzo nerutsigiro zvakasiyana nezvimwe zvigaro.
Karman Akamira mavhiripu uine yakasarudzika ficha iyo inokutendera iwe kutyaira iwe wakamira chakamira chinzvimbo.
Kuona kuvandudzwa mumararamiro ako ezuva nezuva, kumira kwedu wiricheya tekinoroji inoderedza kunetseka uko kumwe mavhiripu zvinogona kukonzera.
Zvione iwe uchiwedzera kuzvimiririra paunoshandisa yedu stand wiricheya technology, ruzivo zuva nezuva kufamba mukana.
izvo mavhiripu Inogona Kukwana Mumota Yangu Diki?
Foldable mavhiripu iyo inogona kukwana mune chero mota.